आलिया भट्ट र रणबीर कपुर को छिटो रिसाउँछ ? रणबीरले आलियाका अगाडी यसो भनेपछि सबै हाँसे – OSNepal
आलिया भट्ट र रणबीर कपुर को छिटो रिसाउँछ ? रणबीरले आलियाका अगाडी यसो भनेपछि सबै हाँसे
यतिबेला आलिया भट्ट र रणवीर कपुर आफ्नो आगामी फिल्म ब्रह्मास्त्रलाई लिएर निक्कै चर्चामा रहेका छन् । रणवीर–आलिया फिल्मको प्रमोशनमा निकै मेहनत गरिरहेका छन् । हालै दुवै स्टारहरू तेलुगु बिग बोस सिजन ५ को सेटमा फिल्मको प्रमोशनमा देखिएका थिए। रणवीर(आलियासँग एस. राजामौली र अयान मुखर्जी पनि उपस्थित भएका थिए।
शोमा फिल्मको प्रमोशनका क्रममा रणवीरले आलियाका लागि केही भने, जुन सुनेर सबै हाँस्न बाध्य भए । रणवीर, आलिया, एस। राजामौली र अयान मुखर्जी तेलुगु बिग बोस सिजन ५ को ग्रान्ड फिनालेमा सहभागी भए। शोका होस्ट नागार्जुन अक्किनेनीले उनलाई बिग बोसको स्टेजमा न्यानो स्वागत गरे। त्यसपछि कुराको सिलसिला सुरु भयो ।
यस क्रममा रणवीरको बारेमा कुरा गर्दै आलियाले आफू निकै शान्त रहेको र यो उनको सुपर पावर भएको बताइन् । आलिया भन्छिन् कि जब उनी कुनै कुरामा रिसाएकी छिन्, तब रणवीरले उनलाई शान्त रहन सल्लाह दिन्छन् । भिडियो क्लिपमा आलियाको उत्साह देखेर उनलाई रणवीरको बारेमा धेरै कुरा भन्न मन लागेको तर भन्न सकिनन् ।
आलियाको बारेमा कुरा गर्दा रणवीरले उनलाई फायर क्र्याकर भनेका छन् । रणवीर भन्छन्– आलिया एक पर्यावरण अनुकूल फायर क्र्याकर हुन् । उनी हुन् लक्ष्मी बम । उनी मुसुक्क हाँस्छिन् । थप कुरा गर्दै रणवीर भन्छन्,–जब आलिया वरिपरि हुन्छ, शान्त रहनुपर्छ । किनभने तिनीहरू सधैं विस्फोट हुन्छन् ।